केन्टलाउप टिभीको साथ फलदायी भिडियो Martech Zone
बिहीबार, सेप्टेम्बर 27, 2007 बिहीबार, सेप्टेम्बर 26, 2013 Douglas Karr
आज मलाई परिचय गराइएको थियो Cantaloupe टिभी जो डिग्रीगोरी एक, एक संस्थापक साझेदार द्वारा। क्यान्टालूपको पछाडिको कथा बाध्यकारी हो र यसमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। क्यान्टालूपको टोलीसँग उनीहरूले के प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका छन् भन्ने बारे आफ्नै प्रतिक्रिया छ, तर म यसलाई ब्लगि phenomen घटनाको नक्कल गर्ने भिडियोसँग तुलना गर्नेछु।
क्यान्टालूप भिडियो होईन जुन फन्सी यूजर इन्टरफेस वा अद्भुत भिडियो मिक्सिंग र प्रभावहरूमा निर्मित छ। यसको सट्टा, क्यान्टालूपको मोडेल भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि सामग्री र कुराकानी कुञ्जी हो - निर्माण विश्वसनीयता र 'कहानी' भिडियोहरू सँगै जोड्ने र मानिसहरूलाई फिर्ता लैजानको लागि। Cantaloupe सँग आफ्नै 'भिडियो क्षेत्र' मोडेल छ।
साइटहरू निर्माण गर्न सकिन्छ कि भिडियो सामग्री समग्र ('च्यानलहरू'), यस तरिकाले अद्वितीय तर प्रत्येक साइटबाट समान दर्शकहरूले एक अर्कालाई पर्दाफास गर्न सक्छन्। केन्टालूपले प्रचार गर्दछ श्रृंखला भिडियोहरूको, एक बन्द भिडियो मात्र होईन। फेरि, लक्ष्य भनेको कुराकानीमा श्रोताहरूलाई राख्नु हो, केही उच्च-टेक उत्पादन मात्र देखाउनु हुँदैन जुन दिमागलाई व्यस्त बनाउनुको सट्टा हैरान गर्दछ।
यसमा एक नजर राख्नुहोस् केन्टलाउप टिभी बुझ्दै तिनीहरूको साइटमा पृष्ठ। जसरी तिनीहरूले यो राखे:
तपाईंको बारेमा कथाहरू, तपाईंको व्यवसाय र तपाईंको उद्योग।
ईन्टरनेटको शक्ति प्रयोग गर्दा तपाइँको बारेमा "कहलाइने" कथाहरू कैन्टलूपले भिडियोको शक्ति प्रयोग गर्दछन्।
सामग्री लक्षित गर्न सकिन्छ र दर्शकहरूलाई मापन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक भिडियोको 'रिडरशिप' अनुगमन गर्न सकिन्छ र मापन गर्न सकिन्छ कि मान्छेले सम्पूर्ण कुरा हेरिरहेको छ वा चाँडो बेलिमान गर्दै छ। यो साँच्चिकै राम्रो चीज हो। टोलीले केहि सर्च इञ्जिन श्रोतहरू पनि ल्याउँदैछ कि यो प्रविधिको प्रयोग गरेर सुनिश्चित गर्न पनि खोज इञ्जिनहरूबाट प्राप्त हुने ध्यान प्राप्त गर्दछ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूको केही जाँच गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो म्यागजिनहरू साथै।
टेक्नोलोजी अविश्वसनीय सस्तो पनि छ। म सँधै चकित हुन्छु कि तपाईले यी सेवाहरू अनलाइन फेला पार्नुहुने महँगोमा नै छ, क्यान्टलापसँग ब्यापार परिवर्तन गर्ने र यी लागतहरू भुक्तानी गर्ने अवसर छ - बीचमा केही त्याग नगरी। जोनले भने जस्तै यो "साइटमा कताई फ्ल्याश बटन कत्ति चिसो छ, यो सन्देशको बारेमा होइन!"।
निश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस् वास्तविकता श्रृंखला जुन क्यान्टलाउपे आफैंमा गर्नुभयो, यो वास्तवमै रोचक छ।
म बढी एक्सपोजर हुँदै छु Cantaloupe टिभी चाँडै नै, त्यहाँ आउँदै गरेको इन्डियानापोलिस टेक्नोलोजी सम्मेलन हुनेछ जुन म बोल्दैछु कि प्रविधि प्रयोग गर्नेछु (यसमा आउनको लागि ... डिसेम्बरको शुरुमा)। क्यान्टालूप टेलिभिजन धेरै त्यस्तै व्यवसाय हो जुन मैले यहाँ इन्डियानापोलिसमा अंकुरित पारेको देख्छु।
सामान्य थ्रेड यस्तो देखिन्छ कि इन्डियानापोलिस टेक्नोलोजी व्यवसायहरू समस्या समाधान गर्ने बारे हो र फ्लफको बारेमा चिन्ता नगर। हामी यसलाई स्यान होसेमा चचेरो भाईहरूको लागि छोडिदिन्छौं। टेक्नोलोजी क्षेत्र वास्तवमै यहाँ एक संवृद्धि समुदायमा बढ्दैछ र हामी आफैंलाई संगठित गर्न थालेका छौं। यो यसको एक अंश हुन ठूलो छ!
नाम को बारे मा, Cantaloupe, यो भर्खरै भयो कि ती शान्त नामहरू मध्ये एक हो ... जोन एक cantaloupe मा खोदै थियो, अवश्य।
टैग: Cantaloupecantaloupe.tvजोन डिग्रेगरी
उफ्! टिप्पणीहरू फर्किए।